Semalt विभिन्न युट्युब भिडियोहरू स्क्र्याप गर्न विभिन्न तरिकाहरू प्रदान गर्दछ
कसरी एकाधिक यूट्यूब वा डेली मोशन भिडियोहरू स्क्र्याप गर्ने? यो एक प्रमुख प्रश्न हो जुन बिभिन्न वेबमास्टरहरू, डाटा विश्लेषकहरू, र प्रोग्रामरहरू द्वारा सोधिन्छ। चाहे तपाईं अफलाइन प्रयोगको लागि यूट्यूब भिडियो स्क्र्याप गर्न चाहानुहुन्छ वा एक उत्कृष्ट YouTube रिमिक्स सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले एक विश्वसनीय YouTube स्क्र्यापरको लागि अप्ट गर्नुपर्नेछ। इन्टरनेटमा विभिन्न विकल्पहरू छन्, तर उत्तम YouTube स्क्र्यापिping सफ्टवेयर तल उल्लेख गरिएको छ।
SaveVid एक प्रयोग गर्न सजिलो युट्यूब स्क्रैपर हो र एक प्रयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस छ। तपाईं SaveVid.com बाट सिधा यो उपकरण डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र बहु अडियो र भिडियो फाईलहरूलाई लक्षित गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले भर्खर एक युट्यूब भिडियोको URL प्रतिलिपि गरेर टाँस्न आवश्यक छ जुन तपाईं स्क्र्याप गर्न चाहनुहुन्छ र डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोडिंग सम्पन्न हुँदा, SaveVid ले तपाईंलाई आउटपुट फाइलको ढाँचा छान्नको लागि सोध्नेछ। त्यहाँ धेरै विकल्प र सुविधाहरू छन् जुन अन्य अनुप्रयोग स्क्र्यापि software सफ्टवेयरको तुलनामा यस अनुप्रयोगलाई राम्रो बनाउँदछ। यूट्यूबको साथसाथै, तपाईं डेली मोशन, ब्रेक, मेटाकारे, माइस्पेस, वीह, फेसबुक, रभर्भर, भिमेओ, ब्लीप.टीभ, फनी वा डाई, र मेगाविडियोका भिडियो फाईलहरू सक्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ।
SaveVid जस्तै, KeepVid एक अन्तर्क्रियात्मक भिडियो स्क्र्यापिंग सेवा हो। यी दुबै उपकरणहरूमा समान सुविधाहरू र विकल्पहरू छन् र तपाईंलाई केही क्लिकमा यूट्यूब भिडियोहरू स्क्र्याप गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईंले प्रतिलिपि गरेर टाँस्नु पर्ने हुन्छ वा यूट्यूब यूआरएल यसको खोज क्षेत्रमा सम्मिलित गर्नुपर्नेछ र फाईल ढाँचा र गुण छनौट गर्नुपर्नेछ। एक पटक यो जानकारी सम्मिलित भएपछि, किटकिडले तुरून्त डाउनलोड गर्ने वा यूट्यूब भिडियो स्क्र्याप गर्ने छ र क्वालिटीमा सम्झौता गर्दैन।
यो सुरक्षित छ कि Zamzar माथिका दुई उपकरणहरू भन्दा फरक तरीकाले काम गर्दछ। यो भिडीयो फाइलहरुलाई बिभिन्न फाईल प्रकारहरुमा रूपान्तरण गर्न सक्षम छ र यूट्यूब र डेलीमोशन फाईलहरु लाई खुवाउन व्यापक रुपमा प्रयोग गरीन्छ। तपाईंले भर्खरको क्षेत्रमा प्रतिलिपि गरेर टाँस्नु पर्छ URL फाईल ढाँचा। सबै भन्दा राम्रो समर्थित फाईल स्वरूपहरू MOV, MP4, WMV, र FLV हो। तपाईं यी आवश्यकताहरू मध्ये कुनै एक ढाँचा छान्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ईमेल आईडी घुसाउनुहोस् जहाँ तपाईं आउटपुट प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। अन्तिम चरणमा तपाईले कन्भर्ट बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, र Zamzar ले तपाईको यूट्यूब वा डेली मोशन भिडियोलाई केही सेकेन्डमा स्क्र्याप गर्नेछ। स्क्र्याप्ड फाइल त्यसपछि प्रयोगकर्ताको ईमेल ठेगानामा पठाइन्छ र तुरून्त डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
YouTube. युट्यूबका लागि भिडियोडाउनलोडर (क्रोम विस्तार)
भिडियोडाउनलोडर क्रोम प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्तम YouTube स्क्र्यापर हो। यो सबै भन्दा राम्रो यसको उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस को लागी परिचित छ र स्थापना गर्न सजिलो छ। थप, यो एक्स्टेन्शन सबै अपरेटि systems प्रणालीहरूको साथ उपयुक्त छ। तपाईंले भर्खर यसलाई डाउनलोड र स्थापना गर्नुपर्नेछ र तपाईंको युट्यूब भिडियोको यूआरएल घुसाउनुपर्नेछ। अर्को चरणमा, तपाईं डाउनलोड बटनमा ओट क्लिक गर्नुहुनेछ, र स्क्र्याप्ड भिडियो तपाईंको हार्ड डिस्कमा बचत हुनेछ।
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, VDownlaoder एक नि: शुल्क सेवा हो जुन सबै वेब ब्राउजरहरूसँग उपयुक्त छ। यो एक सब भन्दा शक्तिशाली र प्रख्यात यूट्यूब स्क्रैपर्स हो र तपाईंलाई स्क्र्याप गरिएको सामग्री, छविहरू, र भिडियोहरू फेसबुक, Vimeo, Veoh, यूट्यूब, डेली मोशन, ब्लिप.टीभी, र मेगावीडियोबाट डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ।